स्वामीजीको सदीक्षा पूरा गर्न कतिवर्ष महायज्ञ गर्ने ? अब राज्यसंग सहयोग मागौँ ! – ebaglung.com
२०७३ फाल्गुन १८, बुधबार २१:५६	Footer Slider, Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
तेश्रो सप्ताहव्यापी पन्चकोट महायज्ञमा उठ्यो सवा २ करोड रुपैया !
हरिप्रसाद शर्मा, बागलुङ, २०७३ फागुन १८ । बागलुङ नगरपालिका-८ सर्वसिद्धिधाम पञ्चकोटमा सञ्चालित पञ्चकोट बिराट ज्ञान महायज्ञ सम्पन्न भएको छ । तेश्रो सप्ताहव्यापी महायज्ञमा बागदान सहित २ करोड ३० लाख रुपैया संकलन भएको महायज्ञ मूल आयोजक समितिका महासचिव बसन्तकुमार श्रेष्ठले बताएका छन ।
स्वामी कमलनयनाचार्यको सक्रियतामा उनको जन्मस्थलमा विगत तीन वर्ष देखी लगातार महायज्ञ सन्चालन हुँदै आएको छ । पन्चकोटलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यले निर्माण स्थलमा विभिन्न कार्यहरु भैरहेका छन् । स्वामीजीले चिताए अनुसारका कार्य सम्पन्न गर्न २ अर्ब रुपयाँ खर्च लाग्ने अनुमान आयोजकले गरेका छन् । आयोजकहरुले निर्माण कार्य सम्पन्न नभएसम्म साल बसालीरुपमा महायज्ञ गर्दै जानेपनि बताएका छन् ।
केहि दिन पहिले भएको पत्रकार भेटघाटका अवसरमा पहिलो महायज्ञमा बागदान गर्नेहरुले रकम दिन बाँकी रहेको जानकारी दिईएको थियो । अहिले पनि बागदान सहित भनिएकाले कति लाख बागदान हो त्यो खुलाउनु राम्रो हुन्छ । स्वामीजीको सपना साकार पार्न चाहिने बजेट महायज्ञ गरेर नै संकलन गर्नेहो भने सय वर्षमा पनि पार पाईने लक्षण देखिदैन ।
प्रत्यक वर्ष धान्यान्चल महायज्ञ सन्चालन गरेर श्रद्धालुहरुबाट संकलित, धान, चामल, नगद रकमबाट मात्र पन्चकोट सर्वसिद्धिधाममा सिसमहल जस्ता महत्वाकांक्षी योजना निर्माण कार्यहरु सम्पन्न गर्न लगभग मुस्किल प्राय: हुनाले राज्यबाट सहयोग लिन स्थानीयले स्वामीजीको ध्यानाकर्षण गराउन थालेका छन् ।
वर्षैपिच्छे धान्यान्चल महायज्ञ गरेर आसपासका श्रद्धालुहरुलाई मात्र भार पार्नु भन्दा सबै मिलेर राज्यसंग सहयोगको याचना गर्नु समय सान्दर्भिक हुनेछ । स्वामीजीको सपना पनि छिटै साकार हुनेछ ।
एउटै उद्देश्यका निम्ति एकै स्थानमा बर्षै पिच्छे धनधान्यान्चल महायज्ञ गरिरहनु कति उपयुक्त हुन्छ ? बषैँ पिच्छेको महायज्ञबाट श्रद्धालुहरु कति प्रभावित हुन्छन् ? भन्ने कुरालाई गौणरुपमा लिईनु हुँदैन । यसमा प्रशासनिक निकायकोपनि ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।
सर्वसिद्धिधाम पन्चकोट नामाकरण गरिएजस्तै सर्वधर्म समभाव राखेर निर्माण कार्य अघि बढाईनु पर्ने श्रद्धालुहरुले आग्रह गरेका छन् । उनिहरुले विशुद्ध नेपाली कला झल्किने मन्दिरहरुको निर्माण गरिनु पर्ने आवश्यकता समेत औँल्याएका छन् । बिना मास्टर प्लान चाहको भरमा निर्माण कार्य थप्दै गर्दा व्ययभार झन थपिदै जान्छ र महायज्ञपनि लम्बिदै जान्छ । ५५५५ केजी तौलको घण्टा र १०८ फिट अग्लो कलशको बारेमा श्रद्धालुहरुले चासो राखेका छन् ।
महायज्ञको समापन समारोहका प्रमुख अतिथीहरु पर्वतका सांसद अर्जुनप्रसाद जोशी, बागलुङकी सांसद चम्पा खड्काले पञ्चकोटको भौतिक निर्माणका योजनाहरु सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सहयोगको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको समाचारमा जनाईएको छ ।
महायज्ञ अवधिभर साढे ४ सय संस्थापक सदस्यहरु भएको महायज्ञ मूल आयोजक समितिका प्रतिनिधी अध्यक्ष नगेन्द्र शर्माले बताएका छन् । स्वामीजीको पन्चकोट निर्माण गर्ने सदीक्षा पूरा गर्न श्रद्धालु भक्तहरु समेत सबै गणले राज्यसंग बजेट माग गरौँ, जनता जनार्दनको तन मनले मात्र पुग्दैन भन्न समय मै बुझौँ ।